Olee otú Play, tọghata na Dezie WMA Files na Mac OS X (Mavericks gụnyere
> Resource> Mac> Olee otú iji Play, tọghata na Dezie WMA Files na Mac OS X (Yosemite gụnyere)
Olee otú Play, tọghata na Dezie WMA Files na Mac OS X (Yosemite gụnyere)
1. Gịnị bụ WMA?
WMA anọchi Windows Media Audio, bụ ihe audio data mkpakọ technology mepụtara Microsoft. Ọ nwere ike na-ezo aka audio format ma ọ bụ ọdịyo codecs. Dị ka audio faịlụ Ọkpụkpọ, a WMA faịlụ a bụ na ọtụtụ ikpe ẹdude ke Advanced Systems Format (ASF) - a proprietary Microsoft akpa usoro maka dijitalụ ọdịyo ma ọ bụ dijitalụ video. Dị ka audio codecs, WMA agụnye anọ codecs: WMA, WMA Pro, WMA Lossless, na WMA Voice. Mụta ihe banyere WMA si Wikipedia
2. Olee otú igwu egwu WMA on Mac OS X?
WMA bụ a elu-edu audio faịlụ Ọkpụkpọ. Ị nwere ike na-ege ntị music na usoro na obere ka ọ dịghị àgwà ọnwụ. Ma na-emekarị, nanị ihe ọ na-arụ ọrụ Windows Media Player. Ọ bụrụ na ị a Mac ọrụ na onye chọrọ igwu WMA on Mac, i nwere ike na-abịa gafee nsogbu ụfọdụ. Gị Mac-dabeere ọkpụkpọ nwere ike adịghị akwado WMA faịlụ. Na nke a, i nwere ike iji a dị ike WMA ọkpụkpọ maka Mac. Nke ahụ bụ VLC mgbasa ozi ọkpụkpọ, kasị ike ọkpụkpọ maka ma Mac na Windows ọrụ na-egwu ihe ọ na-ewu ewu usoro. Ọzọkwa, ị nwere ike họrọ a pụrụ ịdabere na WMA Ntụgharị Mac (Mountain odum gụnyere) inyere gị aka tọghata WMA ka a Mac-dakọtara usoro maka playback ọkacha mmasị gị ọkpụkpọ. Na a okwu, na-egwu WMA on Mac bụghị dị ka ike dị ka ị na-eche. Dị nnọọ họrọ a WMA Mac ọkpụkpọ ma ọ bụ Mac WMA Ntụgharị.
3. Olee otú iji tọghata WMA faịlụ na uku a WMA Ntụgharị maka Mac
Amaghị otú iji tọghata WMA faịlụ na Mac? Ndị kasị mma WMA Ntụgharị Mac na-enye gị ikike iji tọghata WMA faịlụ ka ọtụtụ ndị ọzọ na audio formats dị ka MP3, AAC, M4A, AIFF wdg ọsọ ọsọ na mfe, kpamkpam idozi WMA si incompatibility on Mac ehi S.
Isiokwu a ebe a na-enye gị abụọ nsụgharị nke a WMA Ntụgharị Mac. Ị nwere ike họrọ nri version ibudata na wụnye ya, dabere na Mac processor. Ọ bụrụ na ị na-amaghị nke na otu onye bụ ihe kwesịrị ekwesị, na-agbalị nnọọ Intel version, n'ihi na ọ bụ ndị ọzọ n'ọtụtụ ebe na n'oge.
Ọ bụrụ na ị hụrụ nke iPod, iPhone, iPad, Ohere inweta bụ na ị chọrọ iji na-enweta ebube WMA music na-ewu ewu obere egwuregwu. Ihe ngwọta kasị mma bụ iji tọghata WMA Mac. N'oge a, i nwere ike iji nke a Mac WMA Ntụgharị ịrụ ọrụ, na-enweghị ihe ọ bụla audio ọnwụ. Mgbe WMA akakabarede Mac, ị nwere ike were were mbubata WMA ka iTunes, na mgbe ahụ mmekọrịta ka iPod, iPad, na iPhone. Usoro dị nnọọ mfe, dị nnọọ ole na ole clicks.
Akwado Mac OS: Mac OS X 10.11 (El Capitan), 10.10, 10,9, 10,8, 10.7, 10.6
2. Mac Pro, Unibody MacBook, Mac Obere, MacBook, MacBook Pro, MacBook Air, iMac na PC na Mac OS X.
4. Olee dezie WMA faịlụ na Mac OS X (El Capitan gụnyere)?
I nwekwara ike iji nke a ngwa dezie gị WMA faịlụ. Nke a mma WMA nchịkọta akụkọ-enye gị ohere kewaa WMA faịlụ n'ime ọtụtụ obere-size mkpachị, na mgbe ahụ ịchụpụ gị achọghị audio mkpachị, dị nnọọ jikota gị na-achọsi ike agba n'ime nnukwu otu.
Olee otú iji tọghata WMV ka MP4 na ala na Win / Mac (Yosemite gụnyere)
Olee otú iji tọghata WMV ka MOV (QuickTime) On Mac / Win
Olee otú iji tọghata WMV ka AVI na Windows na Mac
Netputing handyPrint maka Mac
JDownloader maka Mac
Olee Otú Ị Pụrụ Download Music si mama Machine
Top 3 AVI Players maka Mac (Yosemite & Mavericks gụnyere)